Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliya iyo dowlad gobolleedyada xubnaha ka ah inay wadashaqeyn dhaw yeeshaan. Arrimahaasi ayaa waxaa lagu sheegay kulan gaar ahaa oo goluhu uu kaga hadlayay dhacdooyinkii waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay muddadii u dhaxaysay Diseembar ilaa 4-tii bishan May Raisedon Zenenga oo ah ku xigeenka madaxa xafiiska Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya ayaa golaha ammaanka u sheegay in howlgalka UNSOM uu sannadkan ugu billowday dhibaatooyin dhanka amniga ah oo ay kamid yihiin weerarkii lagu qaaday Xalane iyo qalalaasaha siyaasadeed ee horseeday in dowladda Soomaaliya ay dalkeeda ka eridday wakiilkii xog-hayaha Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Nicholas Haysom.
Waxaa uu sheegay inay sameeyeen dadaallo siyaasadeed oo dib loogu soo celinayo xiriirkii kala dhexeeyay dowladda Federaalka ee Soomaaliya. Safiirka Shiinaha u fadhiya Qaramada Midoobey ayaa ka codsaday beesha caalamka in dowladda Soomaaliya ay taageero dheeraad ah ka siiyaan xoojinta arrimaha amniga iyo dib u dhiska ciidammada.
Ku-xigeenka xafiiska Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya, Raisedon Zenenga ayaa kula taliyay Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada inay xoojiyaan xiriirkooda isla markaasa ay si wadajir ah uga shaqeeyaan danaha dalka. Waxaa uu carrabka ku adkeeyay inay waajib tahay sare u qaadidda wadashaqeynta dowladda dhexe iyo maamullada si loo xalliyo caqabado badan oo ku hor gudban in heshiis ay gaaran.
Waxaa lasoo jeediyay in la iska kaashado taakuleynta iyo taageerada loo fidinayo shacabka ay abaaraha saameeyeen. Ku-xigeenka madaxa arrimaha bani'aadanimada iyo gargaarka Qaramada Midoobey, Ursula Mueller, ayaa sheegtay in 4. Ku-xigeenka madaxa xafiiska Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya, Raisedon Zenenga ayaa sheegay in wadahadalladii la isku mari waayay ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Somaliland ay saameyn ku yeesheen dib u eegistii lagu sameyn lahaa dhameystirka dastuurka.
Waxaa uu sidoo kale bogaadiyay hadalkii madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi uu ka yiri xuska ka May ee ahaa inay ka go'aantahay in Puntland ay kala shaqeeyaan arrimaha amniga, waxaana kamid ah sii deynta maxaabiista iyo in dowladda Soomaaliya ay kala shaqeyn doonaan arrimaha amniga, gancsiga iyo waxbarashada. UN: Somaliland waxay saameyn ku yeelaneysaa dib u eegidda dastuurka Soomaaliya 23 Maajo Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan.
Mowduucyada la xiriira Golaha amniga ee UN Soomaaliya. Gadaal ilaa kor.
Hawsha Guddida Cadaaladda Xubinta 2aad Qod. Magacaabidda Xubnaha Guddida Culimada Qod. Bannaanaanshaha Xubinimada Guddida Culimada Qod. Xeerka Hay'adaha Xubinta 4aad Qod. Shareecada Islaamka. Go'aan qaadasho ku timaadda talo-wadaag. Isu-dheellitirnaanta awoodda dawladnimo oo u qaybsanta; Sharci-dejinta, Fulinta iyo Garsoorka.
Siyaasadda portal. Its version dib-u-soo daabacay ka kooban Hordhaca ah Arar iyo shan cutubyada ugu weyn Qaybo kuwaasoo mid walba uu yahay sub-qaybsan Qaybo Xubno. Hadda waxaa jira guud ahaan Articles Qodobo marka loo eego hore Articles. Somaliland ayaa dukumentiyada kale ee dastuuriga ah ee muhiimadda taariikhiga ah oo ka heshiisyada caalamiga ah ee ay beelaha Somaliland kala duwan saxiixday dawladda Britain u dhaxayn, iyo diyaarinta dastuurka kala duwan ka hor xornimada in Declaration of Dib-u-caddaynta of Xukunka ee Burco oo ka mid ah shirarka horeyn grand oo ka mid ah beelaha Somaliland. Inkastoo Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ahaa madax-bannaan muddo gaaban ee June , waxaa ka dib midaysan la Talyaani Somaliland si ay u sameeyaan Soomaaliya.